Ahoana no hividianana Bitcoin amin'ny Coinbase ary hahazo $ 10 maimaim-poana amin'ny fisoratana anarana! | Vaovao momba ny gadget
Ahoana no hividianana Bitcoin amin'ny Coinbase (mandresy $ 10 maimaim-poana)
Ignacio Sala | | Cryptocurrencies, teknolojia
The Bitcoin, ny cryptocurrency ampiasaina sy malaza indrindra ankehitriny, dia nanjary maodely harahina, ary amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia afaka mahita cryptocurrency hafa isika, cryptocurrency izay manana tombana ambany lavitra noho izay hitantsika ankehitriny amin'ny Bitcoin, Bitcoin izay amin'ny faran'ny taona 2017 dia misy sanda mihoatra ny 13.000 euro.
Ny tombatombana be fanantenana indrindra dia manamafy fa ity cryptocurrency ity dia mety hivarotra mihoatra ny $ 100.000 aza, sanda iray avo loatra loatra ary tsy azo inoana loatra, saingy mahita ny fitomboana nisy nandritra ny taona 2017, zavatra vitsivitsy no mety hahagaga antsika. Na dia avo aza ny sandany, raha manaraka ny andrasana amin'ny fitomboana isika, dia mety ho fotoana iray izao mividy Bitcoins, Coinbase dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra manao izany. Plus raha misoratra anarana amin'ity rohy ity ianao hahazo ianao $ 10 MAIMAIMPOANA rehefa mandoa vola 100 € voalohany ianao.
Amin'ny alàlan'ny Coinbase dia tsy vitan'ny mividy Bitcoins fotsiny isika fa afaka mampiasa vola amin'ny crypto hafa toa ny Etera y Litecoin, izay tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia mitombo ihany koa ary lasa mpisolo toerana ny Bitcoin, na dia mbola lavitra aza ny lalan'izy ireo.
1 Ahoana ny fisoratana anarana hividianana Bitcoin amin'ny Coinbase
2 Ahoana no hividianana Bitcoins amin'ny Coinbase
Ahoana ny fisoratana anarana hividianana Bitcoin amin'ny Coinbase
Voalohany, izahay dia mamporisika ny hividy an'io karazana vola io indrindra noho ny fahaizan'ny zavatra omen'ity serivisy ity antsika, tsy hividy fotsiny, fa koa hahita inona ny vidinao amin'ny fotoana tena izy, na amin'ny alàlan'ny tranokala na amin'ny alàlan'ny fampiharana ho an'ny finday.
Makà maimaimpoana $ 10 amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny Coinbase
Tsindrio ETO handresena $ 10 amin'ny Coinbase
Mandeha amin'ny tranonkala izahay www.coinbase.com ary manokatra kaonty izahay. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mankany amin'ny sisiny ankavanana ambony amin'ny efijery isika ary tsindrio ny Register.
Manaraka izany dia tsy maintsy ampidirintsika ny anarantsika, ny anarantsika, ny hanitsiana ny mailaka ary hisafidy teny miafina. Amin'io lafiny io dia tsy tokony hatsahatra ny fampiasana ny teny miafina mahazatra 123456789, ny teny miafina, ny teny miafina ary ny hafa isan-taona izay manohy ny fampiasan'ny mpampiasa azy indrindra, izay mahatonga ny kaontiny ho mora tohina kokoa noho ny an'ny mpampiasa hafa. Ho fanampin'izay, ny log fidirana dia hampiseho amintsika raha toa ka azo antoka ny teny miafisaintsika na raha tsy izany, tokony hanova azy isika. Ny isa faran'izay kely indrindra dia 10, eo anelanelan'ny tarehimarika, litera ary famantarana.
Farany dia nomarihinay ilay boaty fa tsy robot aho ary ilay boaty izay hanamafisanay fa mihoatra ny 18 taona izahay ary Manaiky ny fifanarahan'ny mpampiasa sy ny politika momba ny tsiambaratelo izahay.
Amin'ny dingana manaraka dia tsy maintsy mandeha any amin'ny kaonty mailaka nampiasaintsika hisoratra anarana izahay hamafiso ny mailaka fanamarinana izay vao azontsika.
Ankehitriny dia tsy maintsy ampidirintsika ny nomeraon-telefaonantsika hampifandraisana ny kaonty noforoninay tamin'ny laharana telefaona iray, amin'izay isaky ny hanao raharaham-barotra izahay, halefa kaody fanamafisana isika fa tsy maintsy ampidirintsika amin'ny Internet.
Raha vao tafiditra ny nomeraon-telefaona isika dia hahazo SMS misy kaody fanamarinana, kaody izay tsy maintsy ampidirintsika ao amin'ny varavarankely manaraka.
Ankehitriny rehefa nahavita ny fizotrany isika dia hiseho izany ny angon-drakitra momba ny portfolio misy antsika amin'ny crypto rehetra izay ananantsika, miaraka amin'ny teny nalaina tamin'izany fotoana izany.
Ahoana no hividianana Bitcoins amin'ny Coinbase
Alohan'ny hanatanterahana ny fividianana voalohany dia tsy maintsy fenointsika ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny famantarana ny tenantsika sy ny fampidirana fomba fandoavambola. Mba hanaovana izany dia mankany amin'ny farany ankavanan'ny efijery sy ny fizarana izahay Fenoy ny kaontinao ary tsindrio aloha Hamarino ny momba anao.
Avy eo isika dia misafidy ny Karazana ID te hampiasa izahay: pasipaoro, fahazoan-dàlana hamily fiara na ID. Amin'ity tranga ity dia mifantina ny famantarana ny sary isika.
Avy eo isika dia handray hafatra an-tsoratra misy adiresy Internet amin'ny finday avo lenta, izay tsy maintsy tsindrio alefaso ny sarin'ny antontan-taratasinay, sary horaisinay araka ny angatahina, na azonay ampiasaina ireo izay efa notehirizinay tao amin'ny fitaovantsika.
Raha vao manamafy ny mombamomba antsika isika dia mila ampio ny kaonty izay tianay hividiananaNa carte de crédit na kaonty amin'ny banky.
Rehefa nahavita ny fombafomba rehetra isika dia tsy maintsy mankany an-tampon'ny efijery ary tsindrio Buy Sell, hanombohana mividy Bitcoins, Ether ary Litecoin. Amin'ity indray mitoraka ity dia hividy Bitcoins isika, ka tsy maintsy safidio Bitcoin ao anatin'ny kiheba Buy.
Avy eo isika dia misafidy ny fomba fandoavam-bola izay efa nidirantsika teo aloha.
Farany dia tokony hampahafantatra ny isan'ny euro tianay hampiasa vola amin'ny Bitcoin, ny varavarankely dia hanavao ny vidin'ny Bitcoins ho azy araka ny sandam-bola apetraka, araka ny vidiny ankehitriny.
Mba hanamafisana ny fividianana dia mila tsindrio fotsiny isika Vidio Bitcoin eo noho eo.
Ao amin'ny tsanganana ankavanana dia haseho izany famintinana ny fandidiana, izay ahitantsika ny fomba fandoavam-bola ampiasaina, rehefa nanao ny fividianana izahay ary aiza no nametrahanay ireo Bitcoins azo, izay amin'ity tranga ity dia kitapom-bolan'ny kaonty nosokafanay tao amin'ny Coinbase.
Farany, ny totalin'ny Bitcoins izay novidianay, ny kaomisiona izay notendren'i Coinbase ho anay amin'ny serivisy ary ny totalin'ny vola nampiasainay tamin'ny fifanakalozana.
Ary izay ihany. Tsarovy izany raha misoratra anarana amin'ny Coinbase ianao amin'ny fipihana eto Hahazo fanomezana $ 10 maimaim-poana ianao rehefa feno ny fametraham-bola $ 100 farafaharatsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Ahoana no hividianana Bitcoin amin'ny Coinbase (mandresy $ 10 maimaim-poana)
Ankafizo ny fiandrasana mandra-pahatongan'i Dadabe Noely miaraka amin'ny "Araho i Santa Claus"
Xiaomi Redmi 5 sy Redmi 5 Plus, mpandahateny vaovao roa ho an'ny antonony